याैनसम्पर्क गर्ने निश्चित समय कुन हो ? र कतिपटक गर्ने ? - Digital Khabar
याैनसम्पर्क गर्ने निश्चित समय कुन हो ? र कतिपटक गर्ने ?
By डिजिटल खबर Last updated Sep 3, 2021
१८ भाद्र, एजेन्सी । सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ ।
Badi PahirobusinessCoronavirusCovid19digital khabardigitalkhabarhealthLockdown
नेपाल भारत सीमा विवाद: दुवैलाई ‘एक अर्काको नक्सा अमान्य’